Ilay planeta hafahafa misy vato sy zavamaniry karamel avy amin'i David Brodeur | Famoronana an-tserasera
Anisan'ny anao 'Series Selestialy', mpanakanto nomerika monina any Chicago David brodeur, namorona tontolo hafahafa feno zavamaniry, voaroy, kristaly manjelanjelatra ary orbia mamy mitsimoka avy amin'ny tany. Na eo aza ny endrika ivelany, Brodeur dia miankina amin'ny lokon'ny voankazo mahazatra hamoronana ity toeram-ponenana ity Willy wonka, izay tsy vitanao ny tsy te-hanatratra sy hamoaka izany rehetra izany.
David brodeur Is a talen'ny famoronana, talen'ny zavakanto, famolavolana ary mpanentanan. Izy dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fahamendrehan'ny marika, ny famolavolana ny hevitra ankapobeny, ny fihazonana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa farany, ary ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa iray hahazoana antoka fa ny fahitana mamorona hita amin'ny alalany. Mifototra amin'ny famolavolana sary sy ny fifandraisana ifanakalozana ny fotony. Ny tena tanjony dia ny Motion Design sy ny marika orinasa.
Izy dia liana amin'ny famoronana sy fanampiana ny hafa hahay tsara kokoa amin'ny teknikan'ny famolavolana, ny lamin'ny toro lalana ary ny marika. Ny mpanjifany dia marika toa Dodge, BMW, FOX, Starz, Intel, Vizio, Adobe, Beats Audio, North Face ary Callaway. Ivelan'ny asany dia afaka mahita fotoana iarahana amin'ny fianakaviany izy ireo, manjono, mitsangatsangana ary maka sary ary manao hetsika any ivelany araka izay tratra. Anisan'ny loka azony dia 'Mpandresy ny fifandraisana amin'ny haitao kanto 2014' ary voafidy ho mpampita hafatra ho an'i 'Adobe Generation Professional Animation Course 2014'.
Afaka mahita ireo tetik'asa misimisy kokoa ianao amin'ny Behance, ary mamoaka singa nomerika vaovao isan'andro koa izy amin'ny azy Instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny planeta hafahafa an'ny zavamaniry sy zavamaniry karamel avy amin'i David Brodeur